Date My Pet » 12 Tips To Garai Dzinotangazve Kana Online Dating
kubudikidza Julie Ritchie
12 Tips To Garai Dzinotangazve Kana Online Dating
Last updated: Oct. 21 2020 | 4 Maminitsi verenga
dzimwe nguva kufambidzana Online vanogona kunzwa aiodza mwoyo chaizvo. Kunogona kukonzera kuti tinzwe varukutika, mwoyo uye kunyange zvinovava. Saka sei imi kudzivisa izvi uye pachinzvimbo kuti paIndaneti kufambidzana kupinda breezy uye mafaro ruzivo kunogona? Heano mazano kwamuri.
– Bvuma kuti uri kuenda kunosangana zvakawanda vanhu paIndaneti kuti kungova haangavi zvauri kutsvaga. Kuti zvakanaka! Zviri chikamu ngaakuitirei. Regai kubvisa kana manhamba kusvika mazana (Handirevi izvi unozvidzinga iwe uye inogona kusvika ichi yakakwirira kana kuverenga ose E-mail). With paIndaneti kufambidzana Pane yakawanda mashoko uye neshure. Kubvuma uye hazvizorevi zvinokunetsa here.
– Ivai hurongwa nokuti mukubata e-mail uye vokukurukura. Izvi zvinogona kukubatsira kudzivisa kupisa panze uye kugara uchida. Ndaimbova mwero e-mail ndinoda kushandisa nokuda nevanhu izvo ndingadai chete kuchinja zvishoma kuchitsamira pamunhu ndakanga kunyorera. Ndinoziva izvi zvinogona kuonekwa sezvo safadza, chokwadi naro aingova vakarongeka nzira kutarisira muitiro uye kugara kumusoro simba. Mushure waita maawa achitaipa wakakwana e-mail chete kuva mhinduro (zvakare), uchanzwisisa nei I zano iri. Munogonawo folders dzakasiyana umo ukaisa vanhu zvichienderana nokuti uri kufarira kana kuti kwete.
– Ramba kwokutanga e-mail pfupi. Handisi kureva kuti iwe havatsvaki kuziva vanhu, chete kuti urambe pakutanga e-mail runako pfupi paunenge achivhara pavo. Kana pashure wandei pfupi e-mail uchiri kufarira uye kukurukura zvose ipapo unogona kuenda zvishoma kwakadzama navo. Uyu zvakakwana kudzivirira kutsva uye kugadzirisa kana iwe vawane e-mail uye mubereko.
– Kutamira 'ari munhu' kana runhare nokukurumidza. Zviripachena kuchengeta vakachengeteka mupfungwa, uye Ndinokurudzira nemakasitoma angu kuenda chaiyo upenyu zuva nokukurumidza. Izvi imhaka yokuti vanhu vanogona kuva chaizvo yakasiyana muupenyu chaihwo kubva sei vari paIndaneti, uye imi hadzizombozvizivi kana vari kuenda kuva akakodzera kusvikira wasangana navo muupenyu chaihwo. Kwaizvozvi regai kupedza maawa mameseji neshure paIndaneti, zvikasadaro uchava kutambisa nguva yakawanda pane vanhu kuti varege kuva akakodzera iwe.
– Usanetseka kana musingadi kuwana mhinduro kuna e-mail iwe tuma. Kana izvi zvikaitika kwauri Ndinoziva inogona kunzwa ipa uye zvakare regai kutora pachako. Dzimwe nguva isu tose nepa yakaoma nezvitsinga apo tinowana HAPANA. No mhinduro chero e-mail tinotumira, hapana contactsGoogle zvichingodaro. Musavhunduka kana zvadai kwamuri, Zvisinei zvinokosha kutora chimwe chinangwa Kutarira zvaunenge zvakanyorwa pamusoro Profile yako uye mifananidzo zvawakaita vaiswa. Matauriro ako Profile kunofanira zvechokwadi kuva noushamwari, chiedza uye anofara. Kana uchiri asina nemhanza kamwe iwe wamaka yako Profile, kumbira shamwari yaunovimba kutarira pamusoro uye kukupa dzinovaka. Kunyange kuva navo tarisa pamusoro vamwe mashoko zvauri kutuma kuti nechokwadi pavaiverenga OK.
– Nenzira yakafanana kana uri mukadzi uye muchimirira kuzochera mashoko uye hapana anouya kuburikidza, zvakare musafunganya. Verenga uye kutevera danho kumusoro. Kuonawo kuti uyu ndiye nzvimbo kuti ini anoratidza vakadzi vanogona kuva avo wokuratidza simba, nokuti danho iri kwokutanga. Zvandinoreva ndezvekuti kuenda mberi uye kutanga neZvapupu uye mameseji vanhu uchifarira. Online kufambidzana nzvimbo zvinogona kwazvo 'ruzha' uye unogona kurasika ari Shuffle kana mukasandizivisa kuvapo renyu. Shandisa kwenyu wokuratidza simba kuonana vanhu uye kuwana kwako nehurongwa panzvimbo, uye ipapo rega kodzero shure enyu zvechikadzi simba kamwe kudyidzana akatanga.
– Regai kuzvitora pachedu kana ivo Zvibvisike. Takaona zvose zvakanga zvichiitika. Ukasangana nemunhu paIndaneti, uri nokungotaura navo, zviri zvose kuenda zvakanaka, kuvaka zvakanaka, zvichida uri kunyange kumutsa kuti kukumbira musi, uye ipapo pakarepo 'POOF' ivo kunyangarika negore utsi, haana kuonekwa zvakare. Ko imi munoti chinhu ipa? Vakaita kufa? Zvakanaka zvimwe kwete. Zvimwe vakanga kutaura nevamwe vanhu paIndaneti, uye mumwe akamuka imomo pakutanga, kana zvimwe aimbova kwavo kuti vakanga vachiri pakavanda rudo rwakaratidzwa musana uye iwe waiva rombo retsono. Pfungwa yacho iri uchatova Hauzivi. Uye izvi zvinoitika nguva dzose! Kana uchiziva izvi zvinobatsira kutora rumborera vabvemo. Ndinogara mazano vakadzi vangu vatengi kwete kuwana zvakare kutorwa mwoyo kusvikira wanyatsoita vakasangana naye muupenyu chaihwo, uye chokwadi kusvikira anonzwira imi ndiye zvinonyatsoda iwe. Kusvikira panguva iyoyo ndiye nzira chete kwamuri kubva zhinji. Musatora 'kutsakatika' pachake.
– Bata zvose pamwe kwekushinywa munyu. kudanana Online ndizvo zvazviri. Uye kana iwe unogona kuzvigamuchira nokuti chii uchava nguva nyore zvikuru naro. Uchasangana dzimwe oddballs, uchasangana vamwe vanhu vakanga unofunga muri ipa, iwe zvichida kusangana vamwe vanhu here uye zvichida uchasangana munhu unogona kuva noukama uye kuwira murudo pamwe. Zvisinei chero mumwe ndiye, ichava chiitiko. Uchava kukura somunhu nemhaka uye imi makakohwa kudzidzira kuwadzana nevakomana kana vasikana. Saka usakanda muna, kungova nechokwadi kutora pamwe kwekushinywa munyu, kuseka neshamwari dzako nezvazvo uye vamwe kunakidzwa nayo munzira.
The bedlam Farm kuongorora For waunotarisira Dog Madzishe
5 Dog Friendly Ideas For A Date First